Amerikaan ulfinnaa pirezi.,isii ka durii George H.W.Bush du'eef biirolee mootummaa cufaa oolchitee alabaallee gadi hiissitee fannifatte
Muddee 05, 2018
The flag-draped casket of former President George H.W. Bush is carried by a joint services military honor guard to Special Air Mission 41 at Ellington Field during a departure ceremony Monday, Dec. 3, 2018, in Houston, TX.
Geroge Herbert Walker Bush, pirezidaantii Amerikaa 41ssoo bara 1989 haga 1993 biyya Amerikaa bulchaa bahe. Isa irraa ammoo Bill Kilintonitti fuudhe bara 1993 haga 2001 biyya bulchee. Kilinton irraa ammo Geroge W.Bush (ilma pirezidaantii 41essoo)tti irraa fuudhee bulche.
George H.W.Buush, 41essoon,Sad.,30,2018 ganna du’e.Reeffa isaa fulaa akka akkaatiin irra maranii jabeennaa fi waan innii biyyaa baheen faarsuutti jiran.
Ilma isaa angafa pirezidaanti George Walker Buushii fi nama hedduutti pirezidaanti kana waan innii biyyaa baheen faarsuutti jira.
Pirezidaantota Amerikaa jiran abran;Jimmy Carter,Bill Clinton,Barack Obama, George Bush fi Donald Trump faatilleen yaadannoo tanaaf mana amantii kiristiyaanaa DC, jiru National Cathedral jiru dhufani reefa geegessan.
Tiraampi, kun awwaalaa mitii guyyaa Buush jabeenna isaatiin faarisunu jedhee saade.
Geroge H.W Buush ganna 94tti du’e Sadaasa 6,2018 lafa innii itti dhalte godina Teksasitti fi mana kitaabaa Teksas fuluma jaartii isaa itti awwaalanitti awwaalan. Gerige H.W.Buush, 41essoon,Sad.,30,2018 ganna 94tti du’e